TANTARA MARINA POROFON’NY FISIAN’NY ANJELY
Tamin’ny 22 Jolay, raha handeha ho any Washington ny rain’ny zazalahy kely atao hoe Brian, no naharay antso tamin’ny finday, fa marary mafy any Hopitaly I Brian. Voatery niverina tampoka izy ary nivantana any amin’ny Hopitaly. Akory ny hatairany fa efa tahaka ny maty ny zanany, efa feno ny fitaovana fameloman’aina rehetra eo aminy.
Ny zavatra nahazo azy, dia terin’ny varavaran’ny “garage” izay mivoha “automatique” I Brian kely, izay vao telo taona monja, ka tandrifin’ny lohany sy ny fony no tery. Rehefa hitan’ny reniny izy dia efa tsy nisy aina intsony, fa Dokotera mpiara-monina amin-dry zareo no niala nenina, namojy azy sy nitondra azy ho any amin’ny Hopitaly. Lasa ny andro iray, mbola tsy niverina ny ainy, tonga ny alina, ary ny ampitso tamin’ny 2 maraina dia taitra izy, avy dia nifoha ary niteny tamin’ny rainy hoe:” Dada a raiso aho”. Akory ny hafalian’ny ray aman-dreniny satria toa an’ireny olona tsy naninona tsy naninona ireny I Brian.
Rehefa maraina ny andro, nojerena, ka tsy nisy fery na fivontosana intsony izy na dia kely aza, fa nanjavona daholo izany ary nahagaga ny mpiasa tao amin’ny hopitaly izany fisehoan-javatra izany.
Afaka iray volana, dia nitantara izao zavatra izao I Brian kely tamin’I Dada sy Neniny, rehefa avy nanao “la sieste” tamin’ny antoandro:
- “Zao ry Neny a tamin’izaho ilay voaterin’ny varavarana iny, tena narary mafy aho, niantso anao aho fa ianao tsy afaka nandre ahy. Nanomboka nitomany aho satria tena narary, fa tampotampoka teo nisy voronkely be dia be avy, nihirahira sy nanidina tato anaty garage ary avy namonjy ahy. Ny anakiray tamin’ireo voronkely ireo dia nihazakazaka nanidina nankany aminao sady niteny taminao hoe “Terin”ny varavarana ao ny zanakao”. Dia izay no nahatonga anao avy nijery ahy.
Dia nanontany azy nyreniny:
- “Ohatran’iza anaka ilay voronkely?”
- Hitan’Ineny, ny sasany fotsy be daholo , fa ny sasany kosa maintso sy fotsy.
- Dia inona no noteneniny anaka?, hoy reniny te hahafantatra misimisy kokoa.
- Zao no nolazainy ry Neny, aza matahotra fa tsy maninona ny zaza, sady notondroiny ny vatako mitsirara eo amin’ny tany, fa izaho ilay tena izaho ry Neny a, efa nesoriny tao amin’ilay vatako dia nentiny niakatra teo akaikin’ny plafond. Dia ianao ry Neny a nihazakazaka ianao dia namonjy le zaho nidaboka tamin’ny tany, dia niteny tamin’ny zaza ianao hoe aza mandeha fa mijanona.
Saiky torana ny reniny nandre izany satria nitamberina tao an-tsainy ny zava-nisy tamin’io fotoana io satria nitalaho tamin’ny vatana tsy mihetsika izy hoe “Brian a, Brian a, aza ilaozana izahay, fa mijanona. Hay hitan’ny zanany sy fantany daholo ny zava-nisy rehetra, nefa izy efa vatana maty tsy mihetsika intsony!
Tamin’izany rehetra izany mantsy, dia efa niala tao amin’ny vatan’I Brian ny fanahiny, ka nisavoana teo akaikin’ny plafond ary hitany daholo ny fihetsika ary reny daholo ny teny izay nolazain’ny mamany.
Dia nanontany azy indray ny reniny rehefa avy eo:
- “Dia nankaiza ianareo anaka avy eo?
- Dia nandeha izahay ry Neny, nandeha lavitra be, tena lavitra be, ary nandeha
faran’izay mafy, ary mbola nahita voronkely be dia be koa. Neny a tena tsara tarehy daholo le voronkely an, faran’izay tsara. Fa izao Neny a, niteny tamiko ireo voronkely fa haveriny any an-trano hono aho, ary dia noteneniny aho hoe “LAZAO AMIN’NY OLONA REHETRA NY AMIN’NY VORONKELY SY IZAY REHETRA HITANAO”. Dia rehefa niverina izahay ry Neny, io fa hitako misy olona anankiray mibata ny zaza amin’ny farafara, dia nampiditra azy tao amin’ny ambulance, ary niezaka niteny tamin’ilay lehilahy aho ry Neny hoe “Aza matahotra, fa tsy maninona ny zaza”.
Dia nohazavain’I Brian tamin’I Dada sy Neniny fa “miaraka amintsika foana ireo voronkely ireo, saingy tsy hitantsika satria mason’olombelona ihany ny antsika, ary tsy rentsika satria sofin’olombelona ihany koa nyantsika. Fa eo akaikintsika foana izy ireo, fa ny fontsika no mahita azy sady nataony teo amin’ny tandrifin’ny fony ny tanany. Ireo voronkely ireo mampirisika antsika hanao zavatra tsara ary miaro antsika amin’ny ratsy…MANANA ANJELY MPIAMBINA ISIKA.
18 votes. Moyenne 2.94 sur 5.